Heavy Cargo Chokufambisa-Suzhou Sohologistics CO., LTD.
Email: sohologistics[email inodzivirirwa]
Imba>Our Services>Lift Inorema>Kutakurwa Kunorema Kwekutakura zvinhu
Zvemabasa epasi rese einjiniya, kutakurwa kwemotokari dzinorema uye dzakapfuura zvinoda nzira dzekufambisa dzakasiyana, idzo dzinogumirwa nenzira dzekufambisa, kugona kusimudza, mamiriro emigwagwa, mugwagwa uye zambuko rekukwirisa chinzvimbo, hupamhi uye kukwirira kwetangi uye zvemunharaunda mirau zvichingodaro., Zvinoita kuti nzira yekufambisa ive yakaoma uye yakaoma. Maitiro ekupedzisa kutakurwa kweanorema uye pamusoro-epamadhigori cargos zvakachengeteka, hupfumi, zvinobudirira uye zvine musoro ndiyo kiyi yekumisikidza mushe kweinjiniya chirongwa.
Hunhu hweKurema Kwenhumbi Yekutakura
Nekubudirira kwemahombekombe einjiniya mapurojekiti, kutakurwa kweanorema uye epamusoro-pegumi cargos ine hunhu hwayo kunze kwekufanana neyakajairwa cargos.
1.zvakakura zvinodiwa zvemumigwagwa mamiriro. Nekuda kwehukosha hwe cargos, zvakafanira kuti uongorore mamiriro emigwagwa pamberi, kusanganisira zvirambidzo zvekufambisa zvemabhiriji uye tunnel munzira, zvipingaidzo padhuze nemugwagwa zvichingodaro. Izvo zvinobatsira kusarudza nzira ine yakanaka nzira yemigwagwa, mashoma mabhiriji uye mashoma marambidzo.
2. Kubatana uye unidirection. Sezvo zvinhu zvinorema uye zvakapfuura-dimension cargos zvakajairika zvinoenderana nezvinodiwa zvakasiyana zveprojekti, chirongwa chakasiyana chinofanirwa kugadziridzwa chega chega chekufambisa. Uye nekuda kwehunhu hwenguva refu yekugadzira kutenderera uye yakakura chiyero, iyo yekufambisa inonyanya kuita unidirectional nepo iyo yekumashure nzira isingaite.
3. Zvinoda vashandi vane hukama nevanyanzvi vepamusoro vanogona kutyaira akakosha mota nemakranani uye vanokwanisa kuchinjika kugadzirisa dzimwe tsaona.
4. Njodzi dzakakwirira dzekufambisa. .Nekuda kwekushomeka kweakakosha cargos, zvinokonzeresa kurasikirwa kwakanyanya kwazvo kwemotokari uye cargos uye chero kumwe kurasikirwa kwakananga kana zvisina kunangana kwehupfumi, zvinowedzera, zvinokanganisa kuitiswa kweprojekti kana paine kusagadzikana panguva yekufambisa.
Zvinogona Kuita Matambudziko Ehuremu Huru Hwenyika Kufambisa
1.Trafficability yeiyo Air chipingamupinyi
Nekuda kwehurefu hwenhumbi inorema pachayo uye pamwe nekukwirira kweplate yemotokari, inowanzo kupfuura miganho yebridge izere neconcvert.
Nekuda kwehuremu hwese hwenhumbi inorema uye mota yakatakura iri yakakura, inoda ongororo yedata uye kuenzanisa kwemigwagwa nemabhiriji munzira. Nekuongorora kwesimba remukati bhiriji uye nepamusoro simba remukati rinogadzirwa nemotokari dzinopfuura napo, kugona kwemutoro kunodiwa kuti uverengerwe izvo zvinoona kuti cargos inogona kupfuura here.
3.Trafficability yenzvimbo Yekutendeuka
Nekuda kwenzvimbo hombe yekutendeuka yemotokari dzinorema dzinotakura, dzinogona kunge dzisingapfuure kana redhiyo yekutendeuka yemugwagwa iri diki kana yakatetepa.
Nekuda kwekureba-kureba kwetirori dzakatakura nemotokari dzinorema, kumwe kushanduka kweplate yetiraki yekumashure kwakaitika mushure mekutakurwa, kuburikidza neyakavezwa kana concave yakatsetseka yeplate yemota yakamhara pamatanho maviri, zvinogona kukonzera marori kukuvara pazasi kana kudzoreredza deformation kutadza.
5.High yekufambisa mutengo
Izvo hazvingobatanidzi chete mota yekufambisa yekutakura mari, asiwo mutengo wekutanga nzira yekuziva, kusimudzira zambuko, bharanzi remhepo kubvisa, mugwagwa kana kuvakwa kwebhiriji.
6.Rong yekufambisa nguva
Sezvo iri inononoka kumhanyisa mota dzekutakura dzakatakura nemotokari dzinorema uye zvakafanira pabasa rekubatsira sekukumbira mvumo yekufambisa yemumugwagwa pamberi, mugwagwa kana kuvakwa kwebhiriji, zvinotora imwe nguva kuendesa.
Maitiro Ekumisikidza eheavy Cargo Land Transportation
1. Kuchengeteka uye kuvimbika. Nekuda kweiyo inorema nhumbi ine kukosha kwakanyanya, -yakareba-nguva yekugadzira kutenderera, hapana chinotsiva, kuchengetedzeka kutanga kunofanirwa kuve kwakanyanya kukosha gwara panguva yekufambisa
2. Zvehupfumi. Sarudza iyo yakakodzera nzira yekufambisa uye maitiro, iyo yakakodzera bhiriji nzira nzira uye nzira yekuvharira nzira uye kudzora mutengo wekufambisa kusvika padanho rakakura sekureba sekuchengeteka kwayo.
3. Kufamba nenguva. Iko kunorema kutakura zvinhu kunogona kusanganisira mukushandisa kweRoad Yekutakura Bhizinesi Rezinesi, kusabvumidzwa kwenzira dzemumigwagwa, kuvaka kumashure migwagwa, kudzora traffic uye chero mamwe mabasa ekugadzirira. Izvo zvinogona kukanganisa makuru ekusimudza michina nguva iripo panzvimbo yekuvaka .saka iyo yose yekufambisa maitiro chirongwa inofanira kunyatso kudzorwa.
Uye zvakare, zvirinani kudzivirira zvinokwanisika kusimudza uye kuendesa, kuve nechokwadi chekuchengetedzeka munzira yekufambisa kusvika padanho rakakura.
Sohologistics Makomborero eheavy Cargo Land Transportation
Sohologistics inobata Mugwagwa Wekutakura Bhizinesi Rezinesi rakapihwa neMOT (Ministry of Transport of the People's Republic of China) uye iko kukodzera kweinorema cargotransportation.
Pamusoro peiyo nyika kutenderera-rwendo yemhando yepamusoro yakasarudzika nzira yemugwagwa, kutakurwa kwehurefu-kureba, pamusoro-upamhi pamusoro-huremu cargos rave iro bhizimusi repakati reSHL.
Sohologistics inonyanya kuita inorema inotakura zvinhu nzira yekutakura bhizinesi yezvigadzirwa zvemabhizimusi, magetsi emagetsi, simba remagetsi, kemikari, simbi zvigadzirwa, njanji chiteshi chengarava yekuvaka michina yakadai sehurefu-kureba, pamusoro-upamhi pamusoro-kukwirira, kuwandisa uye chero zvimwe zvakabatana. Semuenzaniso, pasuo nesuo zvinorema kutakura zvinhu munyika, mukova kune chiteshi chengarava chikuru cheShanghai, Tianjin, Lianyungang, Qingdao, Guangzhou neShenzhen. SHL zvakare ine epasi pekufambisa masevhisi emusuwo kuenda kuChinese muganho chiteshi nenyika dzakavakidzana, senge Manchurian chiteshi, Erenhot chiteshi, Huoerguos chiteshi, kashgar chiteshi, Ulugqat chiteshi, Alataw Pass chiteshi, Pingxiang chiteshi mudunhu reGuxi, Ruili chiteshi muYunnan province, Boten port, Estuary Port zvakare inosanganisira nzira yekudzoka.
SHL renji yetsika-yakavakwa mota michina inosanganisira: Multi - axis simudza uye splicing hydraulic flat semi - tirera, manera ndiro, Heavy basa concave semitrailer, yekuwedzera bhodhi, furemu ndiro, yakadzika-yakati sandara uye super yakadzika yakadzika-pani-pani semi-tirera, nyanzvi blade yekufambisa ndiro., Iwo akakodzera kune ese marudzi ehurefu-kureba, pamusoro-upamhi pamusoro-kukwirira, kuwandisa cargos kutakura, senge mainjiniya muchina wekumanikidza mudziyo, pamusoro-kureba autoclaved keturu, pamusoro-kukwirira bhaira michina, super hombe yekusanganisa chirimwa , inorema simbi kugadzira michina, mhepo simba shongwe dhiramu reza, simbi mamiriro, centrifugal muchina uye mamwe anorema cargos, izvo zvinotibvumidza kugutsa vatengi vedu venyika kemikari indasitiri, magetsi magetsi, simbi, njanji, bhiriji, chiteshi chengarava, mugwagwa kuvaka mapurojekiti uye chero imwe nhumbi inorema inosimudza kutakurwa uye zvekumisikidza zvinodiwa.
Kubvunzurudza kwevatengi uye kuita maitiro maitiro
1.Inodikanwa kupa iyo info yeiyo chaiyo nhumbi zviyero zvehurefu, upamhi, kukwirira, mambure / kwakakomba kurema, POL (chiteshi chekutakura), POD (chiteshi chekubuda)
2. Kune iyo general cargos dhirivhari inodiwa, SHL projekiti logistics maneja ichapa mitengo yekotesheni mukati meawa rimwe chete.
Kune yakakosha cargos (kunyanya yekuwedzera-kureba uye kupamhamha kupfuura yakajairwa zambuko), SHL chirongwa chekugadzirisa maneja ichavaka timu yeprojekti pamwe chete nemumigwagwa wekumisikidza vagadziri kuti vaite nzira yekucherechedza, chirongwa chekufambisa optimization uye vape iyo yekupedzisira chaiyo kotesheni mushure mekufunga kukura kwecargos uye mamiriro emigwagwa akasiyana
3. Kana iyo kotesi yakagamuchirwa nemutengi, tinosaina chibvumirano chekushandira pamwe chete pakati pedu. Kunyangwe pasi muripo uchidikanwa, zvinoenderana nemutengo weyese mari yekufambisa.
4. Zvinoenderana nezuva uye nzvimbo yekutora inodikanwa, mutyairi werori ane hunyanzvi anosvika panzvimbo nenguva. SHL project logistics maneja achave nebasa rekuchengetedza kuchengetedzwa pane saiti. Mushure mekutarisa ruzivo rwekutakura zvinhu rwunopihwa nemutengi neicho chaicho cargos, anozogadzirisa kusimudzira, kusimbisa nekusunga cargos neanotakura.
5. Iye munhu anotarisira pane-saiti kurodha manejimendi anotora mifananidzo yekurodha, kusimbisa uye kusunga zvinhu uye kuzvitumira kune vatengi, uye ozotanga nekutakura.
6. VIP yevatengi sevhisi yezvinhu zvako ichaita chaiyo-nguva GPS kumisikidzwa kwemotokari dzinotakura uye kutumira mhinduro kwauri kwauri nenguva.
7. Pakusvika kwema cargos kwairi kuenda, mutyairi anozobatsira mubati kuita ongororo pakusimbisa uye kusunga kwechitarisiko chemotokari. Mushure mekupasa, ichatanga kusunungura uye kuburitsa zvinhu, uye mubati achasaina risiti yema cargos uye oita rekodhi yemativi ese ari maviri zvichireva kuti kuendesa kwakabudirira kwapera.